Ime ka ndị gị chọọ nsonaazụ | Martech Zone
N'ihi mgbanwe ndị ọrụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ala azụ ịkwalite ndị mmadụ n'ime azụmaahịa a. Eziokwu bụ na ọ bụ usoro agwakọta… ma ọ bụrụ na ị naghị akwalite ndị gị, ha ga-aga ebe ha ga-ahụ ọkụ. Ọ bụrụ n’ịkwalite ndị gị, ha nwere ike nweta onyinye ịga ebe ka mma. Nke ahụ bụ ihe ọghọm nke ndị were gị n'ọrụ niile. Ọ bụrụ nhọpụta gị bụ izochi ndị gị, ị ga-etinyekwu nsogbu karịa. Ihe di iche-iche na ndi ahia na azuta site na ndi ha tukwasiri obi. Ndị gị na- gị asọmpi uru.
Kwesịrị isoro ndị ọrụ gị rụọ ọrụ iji melite nsonaazụ ọchụchọ nke onwe ha ka nsonaazụ ụlọ ọrụ gị wee ka mma. Igha Onwe Gị mepụtara ihe infographic iji nye gị usoro ndị dị mkpa dị mma na Google. A na-enyocha aha ijeri 1.5 na Google kwa ụbọchị mana ndị mmadụ n'ozuzu ha adịchaghị mma na ibe mbụ. Nke a bụ otu ị ga - esi: